Ciyaaraha iyo isboortiga Masar hore | Safarka Absolut
Cayaaraha iyo cayaaraha Masar hore
Isabella | | Masar
Dhaqammadii hore ee Mediterranean, ku dhaqanka isboortiga wuxuu xiriir dhow la lahaa dabaaldegyada iyo firaaqada diinta. Si kastaba ha noqotee, fikradda isboortiga ee qadiimiga Masar aad ayey uga duwan tahay sida ay hadda tahay.
Xaqiiqdii, cilmi baarayaashu waxay ku adkaysanayaan inay jimicsiga jimicsiga sameeyeen oo aysan u ciyaarin sidan oo kale maxaa yeelay xitaa ma haysan erey ay ku tilmaamaan waxqabadkan. Haddaba isboorti sidee ahaa Masar hore?
1 Muxuu ahaa isboorti Masar hore?
2 Ayaa ciyaari jiray Isboorti Masartii hore?
3 Haweenku ma ciyaarayeen isboorti?
4 Isboorti miyaa loo tixgeliyey inuu yahay masraxa Masar hore?
5 Muxuu ahaa iiddii Fircoon?
6 Ma jiray fircoon u istaagay sidii orodyahan?
7 Door intee la eg ayuu Nile ka ciyaaray isboortiga dalka Masar?
8 Ma jiray ilaah laxiriira isboortiga khuraafaadka Masaarida?
Muxuu ahaa isboorti Masar hore?
Cimilada waddanku waxay ahayd mid ku habboon in inta badan maalinta lagu qaato dibedda taasna waxay doorbidday ku dhaqanka jimicsiga jirka, laakiin iyada oo aan lahayn fikrad ah inuu isboorti yahay sida hadda la fekeray. Si kastaba ha noqotee, waxay si fiican u ogaadeen xiriirka ka dhexeeya dhaqdhaqaaqa jirka iyo murqaha wanaagsan.
Asal ahaan, isboortiga Masar hore wuxuu ka koobnaa ciyaaro bannaanka ka socda iyo dagaal milatari iyo tababar dagaal. Meelaha qadiimiga ah qaarkood, qabuuro ay ku jiraan sawirro matalaya farshaxanka dagaalka oo u ekaa karate iyo judo. Matalaad sawir ayaa sidoo kale laga helay qabriga Jeruef halkaas oo dhowr qof ay ka muuqdaan meel dagaal ah sidii inay tahay ciyaar feer.
Ciyaar kale oo ka dhacday Masar qadiimiga ah oo lagu dhaqmi jiray ayaa ah ciyaaraha fudud. Waxay ku saabsanayd tartamo yar yar min dhibic ilaa dhibic kale si loo arko cida dhaqsaha badan. Bannaanka in badan, orodka ama dabaasha waxay ahaayeen waxqabadyo aad ugu badan iyaga.
Dhaqdhaqaaq kale oo isboorti oo dabeecad goos goos ah oo ay ku dhaqmaan Masaarida ayaa ah ugaarsiga Hippos, libaaxyada ama maroodiyaasha. Waxaa jira sheekooyin sheegaya in fircoonkii Amenhotep III uu u yimid inuu ugaarsado 90 dibi hal maalin isla markaana Amenhotep II wuxuu awooday inuu dalooliyo gaashaan bir ah isagoo ku toogtay shan fallaadhood isla qaanso isku mid ah. Marka laga hadlayo dadka, iyaguna way ugaarsanayeen laakiin waxay ahayd ciyaar yar sida ugaarsiga duck ee webiga.
Masaaridu sidoo kale waxay abaabuleen orodyo fardooley ah iyo sidoo kale tartamo qaanso toogasho, taas oo ahayd isboorti heer sare ah waqtigaas.
Ayaa ciyaari jiray Isboorti Masartii hore?
Kumanaan sano ka hor, rajada cimriga ma ahayn mid aad u dheer Masarna kama aysan dhaafin 40 sano. Taasi waa sababta dadka jimicsiga ku dhaqma ay ahaayeen kuwo aad u yar oo u nugul dhaqdhaqaaqa jirka.
Haweenku ma ciyaarayeen isboorti?
In kasta oo aad u malayn karto si ka duwan, haweenkii hore ee reer Masar ayaa ciyaari jiray ciyaaro laakiin may ahayn waxqabadyo laxiriira tartanka, xoogga ama biyaha laakiin waxay ahaayeen kuwo ku saabsan jimicsiga, kharribaadda iyo qoob ka ciyaarka. Taasi waa, haweenku waxay door muuqda ka ciyaareen xafladaha gaarka loo leeyahay iyo dabaaldegyada diinta sida qoob-ka-ciyaarka iyo acrobats. Maanta waxaan dhihi karnaa haweenkani waxay sameeyeen wax la mid ah jimicsiga jimicsiga.
Isboorti miyaa loo tixgeliyey inuu yahay masraxa Masar hore?
Si ka duwan dadka kale sida Roomaanka ama Griiga, Isboortiga Masar looma maleynin inuu yahay ciyaar daawasho ah. Iyada oo loo marayo sawirada iyo matalaada laga helay qodis qadiimiga ah, suurtagal ma ahayn in la helo tixraacyo goobo waaweyn ama xaalado la xiriira bandhigyo isboorti oo waaweyn.
Tani waxay ka dhigan tahay in Masar hore aysan jirin wax la yiraahdo Ciyaaraha Olombikada laakiin halkii Masaarida waxay ku tartameen aagga gaarka loo leeyahay waxayna si fudud ugu sameeyeen madadaalo. Ma jirin xitaa dhagaystayaal.
Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo, waxaa jiray xaflad ay fircoonnadu ku dhaqmaan oo si uun loola xiriiri karo dhacdo isboorti. Dabbaaldeggan waxaa la qaban jiray markii boqortooyooyinku ay xukumayeen soddon sano, sidaas darteed waxay ahayd dabaaldeg naadir ah oo ay ugu wacan tahay cimriga dadka ee waqtigaas oo aad u hooseeyay.
Muxuu ahaa iiddii Fircoon?
Sannad-guuradan sannad-guurada ah ee 30-ka sano ee boqornimada Fircoon, boqorka wuxuu ku qasbanaaday inuu dhex maro xayndaab laba jibbaaran oo nooc dhaqameed ah oo ujeeddadiisu ahayd inuu dadkiisa tuso inuu weli da 'yar yahay isla markaana uu haysto awood ku filan oo uu xukunka ku sii wado dalka.
Bandhigii ugu horreeyay ee noociisa ah ayaa loo dabaaldegay 30 sano oo xukun ah iyo seddexdii sano ee dambeba. Tusaale ahaan, waxaa la sheegaa in fircoon Ramses II uu la dhintey in ka badan sagaashan sano, sidaa darteed wuxuu heli lahaa waqti badan oo uu ku qabto ciidaha kala duwan ee ka reeban waqtigaas.
Ma jiray fircoon u istaagay sidii orodyahan?
Fircoon Ramses II aad buu u cimri dheeraa wuxuuna ka qayb galay dhawr xafladood-sanad guuradii laakiin way ahayd Amenhotep II oo loo tixgeliyey nooc ka mid ah boqortooyada ciyaaraha fudud, dhanka bilicsanaanta ama muuqaalka jirka.
Door intee la eg ayuu Nile ka ciyaaray isboortiga dalka Masar?
Webiga Niil wuxuu ahaa waddada weyn ee waddanku xilligaas maro, taas oo alaabada laga raro oo dadku ku safraan. Tan awgeed, doomaha lagu raaco iyo doonyaha shiraaca ayaa loo adeegsaday, sidaa darteed Masriyiintu waxay ku fiicnaayeen anshaxdan.
Taasi waa sababta Nile ay ugu abaabuli karaan xoogaa tartan gaar ah, ha ahaato doon ama dabbaal, laakiin kama aysan ahayn tartan lala galo dadweynaha halka lagu guuleysto qofka guuleysta.
Marka laga hadlayo kalluumeysiga, dukumiintiyo ayaa la hayaa oo muujinaya taas Wabiga Niil waxaa sidoo kale jiray tartamo qaar ka mid ah dabeecado gaar loo leeyahay si loo arko cida awood u leh inay qabato inta badan.
Ma jiray ilaah laxiriira isboortiga khuraafaadka Masaarida?
Masartii hore waxaa jiray ilaahyo ku dhowaad dhammaan qaybaha nolosha laakiin si xiiso leh looma qaban cayaaraha maxaa yeelay, sidaan horay u soo tilmaamay, xilligaas isboortiga looma fikirin sida aan maanta nahay.
Si kastaba ha noqotee, Masriyiintu waxay u caabudi jireen ilaahyo u ekaanta xayawaanka astaamaha lagu tilmaamo iyaga. Taas macnaheedu waxaa weeye, ilaahyada leh jirka shimbirta waxaa lagu qaddarin jiray firfircoonidooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay duulaan, halka ilaahyada leh qaab dibi ay ku sameeyeen xoogga ay xayawaankani leeyihiin, sida ku dhacda xayawaanka kale sida yaxaasyada .
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cayaaraha iyo cayaaraha Masar hore
Qaado qubeyska balliga guduudka ah, Hillier Lake
Taariikhda Matryoshka, caruusadda Ruushka